I-Wagin Country Retreat; ukuphumla kwaye usekhaya
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguImogen
Relax kwisiphelo esiphezulu sedolophu, ejikelezwe yindawo yokugcina indalo. Uhambo olufutshane luya kukuzisa kumbindi wedolophu apho uya kufumana zonke izinto zakho eziluncedo.
Sineyunithi entsha yokulala eyakhiweyo emi-2, equlathwe ngokupheleleyo, ibekwe kwiihektare ezili-10. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka impelaveki ukusuka esixekweni okanye kwindawo yosapho. Kuninzi ukuphonononga- iWagin ikulindele!
Sinenja yosapho enobuhlobo ezulazula kwiindawo ezingaphandle ngexesha lasemini.
Iyunithi inamagumbi okulala amabini; enye enebhedi yokumkanikazi kwaye enye ineebhedi ezimbini ezingatshatanga (nceda ucele ngexesha lokubhukisha ukuba ufuna ibhedi yenkosi endaweni yee singles ezimbini kwigumbi lesibini kwaye ndiya kuzama konke okusemandleni am ukuhlalisa.) Kukho ikhitshi elinabo bonke. izibonelelo oya kuzifuna ngokuhlala kwakho. Igumbi lokuhlambela elineshawa, igumbi lokuhlala elinetafile yokutyela / idesika yomsebenzi.
IWagin likhaya lomfanekiso oqingqiweyo weGiant Ram okumgama omfutshane. Kwakhona likhaya kwiWoolorama eyenzeka minyaka le. Umbindi wedolophu ukufutshane kakhulu, ubonelela ngecafe, ithala leencwadi, iga kunye nevenkile enkulu ukubalula ezimbalwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Imogen
Abanini basendlini esecaleni, bayafumaneka ukuba unemibuzo okanye ungathanda ulwazi oluthile lwedolophu, okanye ukuba uphelelwe lubisi!